Tsy maintsy manaraka hatrany isika
"Dia aoka hahalala, eny, aoka hiezaka hahalala an’ i Jehovah isika; Mahatoky toy ny maraina ny fiposahany." Hôsea 6 :3
Tonga hampianatra ny taranak'olombelona momba ny lalana ho amin'ny famon­jena i Kristy, ary nataony mazava tsara izany lalana izany mba ho azon'ny zazakely hizorana. Mibaiko ny mpianany Izy hoe manaraha hatrany mba hahalalanareo ny Tompo, ary rehefa manaraka ny fitari­hany isan'andro ireo, dia ho fantany fa mahatoky toy ny maraina ny fiposahany.
Efa nahita masoandro miposaka ianao, sy ny fipoahan'ny tanin'andro eny amin'ny tanty sy ny lanitra. Mitombo tsikelikely ilay hazavana mangiran-dratsy mandra-piposahan' ny masoandro. Dia mihamitombo sy mamiratra hatrany ny hazavana mandra-pahatrarany an'ingahy be masoandro mibaliaka tanteraka amin'ny mitataovovonana. Izany no fanehoana mahafinaritra ny zavatra irin'Andriamanitra hatao ho an'ny zanany eo amin'ny fanaovany ho lavorary ny fandramanany kristi­anina. Rehefa mandeha isan'andro amin'ny fahazavana izay alefany amintsika isika, amin'ny fankato­avana an-tsitrapo hanao ny fitakiany rehetra, dia mitombo sy mihami­velatra ny fanandramantsika man­dra-pahatrarantsika ny toetra feno maha-lehilahy sy vehivavy ao amin'i Kristy Jesôsy.
Tsy tonga teto an-tany ho mpan jaka i Kristy, ka hanapaka firenena. Fa tonga toy ny olona feno fanetren­tena Izy, hozahan-toetra, ary han­dresy fakam-panahy, hanaraka hatrany tahaka antsika. tsy maintsy manaraka mba hahalalantsika nyTompo.
Amin'ny fandini­hantsika ny fiainany no hahalalantsika hoe hatraiza no tombambidin'ny zavatra ataon'Andriamanitra. ho an'ny zanany, amin'ny alalan'i Kristy. Ary ho fantatsika fa na lehibe manao ahoana aza ny fitsapana sedrain­tsika, dia tsy hihoatra ny zavatra efa niaretan'i Kristy izany mba hahala­lantsika Ilay lalana sy fahamari­nana ary fiainana. Amin'ny fananan­tsika fiainana tahaka izay niainany no tokony hanehoantsika fankasitra­hana ny fahamoizan-tena natao ho antsika.
Rehefa mitodika any amin'ny masoandro ny felam-boninkazo, mba hanampian'ireo tara-pahaza­vana amin'ny fandrafetana sy ny hatsarany sy ny sorany, dia toy izany koa isika, tokony hitodika amin’llay Masoandron'ny Fahamari­nana, mba hiposahan'ny fahaza­van'ny lanitra amintsika, hampiro­boro ny toetrantsika ho tahaka toetran'i Kristy ( ... )
Miankin-doha amin'i Kristy ianao raha te hanana fiainana masina, tahaka ny rantsan-kazo miankina amin'ny vatany mba hitomboany sy hamoazany. Tsy manana fiainana ianao raha misaraka aminy. Tsy manana hery enti-manohitra fakam-panahy na hitomboany amin'ny fahasoavana sy ny fahafenoana.
Raha miray Aminy ianao, dia hiroborobo.